अहिले कलाकारलाई चाकडी गर्ने पर्दैन समाजिक संजाल फेसबुक,युटुबबाट क्षणभरमै लाखौं मान्छेको बीचमा पुग्न सकिन्छ – धिताल चिरिच्याट्ट उर्फ कृष्ण धिताल
अन्तर्वार्ता , कला - साहित्य
सुनिता न्यौपाने ३ असाेज ।
काठमाडाै‌ । हसाएर समाज परिवर्तन गर्छु भन्ने मानिस कमै छन् । समाजका विभिन्न विकृति र असङ्गतिलाई सबैको सामु उद्घाटन गर्ने साहस सबै मानिसहरुमा हुदैन । एकातिर हास्यव्यङ्ग्य जसले पनि गर्न सक्छ भनेर सस्तो विधाका रुपमा पनि लिने चलन छ । भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट कायमै छ र विभिन्न विकृतिहरु भित्रिदै गइरहेका छन् भन्ने आरोपहरु चर्चामा आइरहेका छन् । यस्ता अनेक चुनौतीका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा लाग्ने एउटा सर्जकको नाम हो धिताल चिरिच्याट्ट अर्थात कृष्ण धिताल । सिर्जना मार्फत समाज परिवर्तन गर्न हिडेका एक सर्जक हुन उनी ।
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका धितालले मेरी बास्सै, तीतो सत्य जस्ता टेलिशृङ्खलामा काम गरिसकेका छन् । यसबाहेक नाटक, स्टेज कार्यक्रम आदि क्षेत्रमा पनि काम गर्छन् । बजारमा आउन लागेको चलचित्र जुनामा उनको भूमिका मुख्य रहेको छ ।
हास्य कलाकार कृष्ण धितालसँग जनतापाटीकी सुनिता न्यौपानेले कुराकानी गरेकी छिन् ।
धिताल चिरिच्याट्ट नाम कसरी रहन गयो ?
कक्षा ११ मा पढ्दा नारद खतिवडाको गीत गाएको थिएँ । त्यो गीतबाट चिरिच्याट्ट रहन गयो । पहिले चिरिच्याट्ट धिताल थियो । पछि एउटा नाटक गरेपछि धिताल चिरिच्याट्ट रहन गयो ।
हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा नै लाग्छु भन्ने विचार कहिलेबाट आयो ?
बच्चैबाट यो क्षेत्र मलाई मन पथ्र्याे । यसैलाई नै व्यवसायको बाटोको रुपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच मलाई २०६४ सालपछि मात्र आयो ।
हास्यव्यङ्ग्यको क्षेत्रमा लाग्छु भनेर कुन कुराले प्रेरित गर्यो ?
विद्यालयमा पढ्दा एउटा गीत गाएको थिए । त्यो गीत गाएपछि सरहरुले प्रोत्साहन गर्नुभयो । तिमीले गर्न सक्छौ भनेर । पछि पढ्न काठमाडौं आएपछि पत्रकार दाईहरुसँग भेट भयो । सानो–सानो कार्यक्रम गर्दा पनि उहाँहरुले नै पत्रिकामा लेख्दिन थाल्नुभयो । म गर्न सके भने अझै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । ती कुराहरुले प्रोत्साहन गर्यो । हास्यव्यङ्ग्य सबैले मन पराउने र चेतनामुलक सन्देश दिन सकिने भएकोले यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने लाग्यो ।
हास्यव्यङ्ग्यले कत्तिको बजार पाइराखेको छ ?
बजार व्यापक छ । अहिले नेपाली कलाकारीतामा सबैभन्दा बढी फस्टाएको विधा भनेको नै हास्यव्यङ्ग्य हो ।
तपाईले आफ्नो सङ्घर्षलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
नेपाली हास्यव्यङ्ग्यमा पनि सिन्डिकेट छ । अग्रजहरुले धेरै थोरै विकृति भिœयाइरहनु भएको छ । म गाउँबाट आएको मान्छे काठमाडौंमा अवसर पाउने भन्ने एकदमै ठूलो चुनौतीको कुरा थियो । सानो सानो भूमिकाको लागि मानिसहरुको चाकडी गर्नुपर्ने, अगाडि पछाडि तपाई नै ठूलो हो भनेर लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट गुर्जेको मान्छे हुँ म । दिनभरी एउटा सिरियलको लागि पर्खेर बस्नुपथ्र्याे । तर, अन्तिममा पालै आउँदैनथ्यो ।
हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा चुनौतीहरु के के छन् ?
अहिले यो क्षेत्रमा हास्य कलाकार अत्यन्त धेरै आएका छन । जसले गर्दा हास्यव्यङ्ग्य सस्तो विधा भएको छ । यो कारणले हास्यव्यङ्ग्यमा बाढी जस्तै आएको छ । सकारात्मक तरिकाले हास्यव्यङ्ग्य गर्ने मानिसलाई गाह्रो छ ।
जीवनभर हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा लागेर सामान्य जिन्दगी वाँच्न सकिन्छ ?
यसप्रति राज्यको नीति नभएको कारणले सबैभन्दा धेरै समस्या छ । कलाकार स्वयम सिर्जनशील भएर नयाँ नयाँ सिर्जना दिन सक्यो भने यस क्षेत्रमा त्यति असहज हुन्छ झै मलाई लाग्दैन ।
राज्यले हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा के के काम गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
राज्यले एउटा प्रणाली बनाइदिनु पर्छ । जिन्दगीभर यही क्षेत्रमा लागेकाहरु बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मृत्यु हुनु परेको छ । ती कुराहरु राज्यले हेर्नुपर्छ । मैले २० वर्ष कलाकारीता गरे भने राज्यलाई धेरै थोरै योगदान त पुर्याएको हुन्छु । त्यसैले राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिनुपर्र्याे ।
हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रलाई सस्तो विधाका रुपमा लिने प्रवृत्ति छ नि ?
कसैले यो विधालाई सस्तो रुपमा लिएको छ भने त्यो हाम्रै कमजोरी हो । हामीले नै सस्तो वनाइरहेका छौँ । हास्यव्यङ्ग्य भन्ने कुरा यति शक्तिशाली कुरा हो जसले सिर्जनाका माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गराउन सक्छ । हाम्रा प्रस्तुति यस्ता भद्दा छन् त्यो कारणले गर्दा सस्तो कमेडी भइरहेको छ ।
यहाँसम्म आउँदा सहयोग को को बाट पाउनुभयो नि ?
मनोज गजुरेल, सुनिल पोख्रेलले सहयोग गर्नुभयो । रेडियोमा काम गर्दा कम्यूनिकेसन कर्नर, रेडियो सगरमाथा, रेडियो कान्तीपुर, रेडियो मिर्मिरेले सहयोग गरे । सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि सहयोग गरे ।
तपाईको पहिलो स्टेज प्रर्दशन कुन हो ?
कक्षा ११ मा पढ्दा नारद खतिवडाको गीत गाएको थिए ।
पहिलो हास्यव्यङ्ग्य टेलिशुङ्खला कुन हो ?
पहिलो टेलिशुङ्खला भन्न मिल्दैन । तर, अनुहार नै देखाउने पहिलो टेलिशुङ्खला तीतो सत्य हो ।
पहिलो नाटक कुन हो ?
बहादुरपुरको दन्त्यकथा हो । बादल सरकारले लेख्नुभएको थियो ।
मन परेको सवैभन्दा राम्रो प्रस्तुति कुन हो ?
जन आन्दोलनपछि नयाँ राष्ट्रिय गीत आएको थियो । त्यसलाई बिगारेर मैले गीत बनाएको थिए । त्यो गीत प्यारोडी खालको थियो । त्यो समय सम्झिदा अहिले पनि मजा लाग्छ ।
नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रस्तुति कुनै छ ?
एउटा नाटक छ । त्यो नाटक मैले बाध्यताले गरेको थिए ।
सबैभन्दा मनपर्ने हास्य क्षेत्रका अग्रज को हुन् ?
मनोज गजुरेल । समकालीन सुवोध गौतम । गौतमले अरुको नक्कल सवैभन्दा राम्रो गर्छन् । शव्दलाई विश्लेषण गरेर नक्कल गर्ने अहिलेको पुस्तामा उनी नै हुन् । नाटकको क्षेत्रमा सौगात मल्ल र राजकुमार पुडासैनी मन पर्छ ।
यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पुस्तालाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हास्यव्यङ्ग्यमा एकदमै धेरै विकृति आएको छ । हास्यव्यङ्ग्य भनेको टोल छिमेकमा गलत प्रवृत्तिहरु जे देखिरहेका छौँ त्यसलाई नै कला भरेर प्रस्तुत गर्ने कुरा हो । हाम्रोमा भद्दा खालको कमेडी छ । विसङ्गतिलाई सुधार्ने भन्दा पनि उल्टै विकृति भित्रायाइका छौं । राम्रो गर्ने मान्छे पनि छाँयाका परेका छन् । यो क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । अब आउने कलाकारलाई पहिलेको जस्तो चाकडी गर्नु पर्दैन । धेरै माध्यमहरु छन् । सामाजिक सञ्जाल छन् । युटुब च्यानलहरु छन् । आफ्नो सिर्जनालाई राम्रो बनाएर राख्नुभयो भने र मान्छेलाई मन पर्यो भने क्षणभरमै लाखौं मान्छेको बीचमा पुग्न सकिन्छ ।